Kooxda Boko Xaraam oo qabsatay xarun - BBC Somali
Kooxda Boko Xaraam oo qabsatay xarun
Image caption Booliska ka hortaga rabshadaha ee dalka Nigeria.
Waqooyiga Nigeria xarun lagu tababaro boolis ayaa waxaa la wareegay kooxda Boko Xaraam, waxaa sidaa BBC-da u sheegay qof goob joog ahaa.
Rasaas ayaa la maqlay kaddib markii kooxdaasi ay yimaadeen xaruntaasi ayaga oo wata saddex gaari oo hubeysan iyo mootooyin.
Afhayeenka booliska dalka Nigeria ayaa xaqiijiyey weerarka, halka sarkaal sare oo ammaanka qaabilsan uu sheegay in ay u suuragali weyday in lala xiriiro xaruntaasi booliska lagu tababaro tan iyo talaadadii.
Xarunta Liman Kara waxa ay u dhowdahay magaalada Gwoza, oo kooxda Boko Xaraam ay la wareegeen gacan ku haynteeda bishan.
Image caption Qariirada dalka Nigeria
Maxeey yihiin Boko Xaraam
Waxaa la aasaasay sannadkii 2002-dii.
· Waxa ay bilaabeen howgaladooda sannadkii 2001-gii.
Kumanaan ayaa lagu dilay waqooyiga Nigeria.
Waxa ay dhibaato soo gaartay 3-Million oo qof.
Waxaa liiska argagaxisada lagu daray sannadkii 2013-dii.
Kumannaan dad ah ayaa lagu dilay waqooyi-bari Nigeria tan iyo markii kooxda Boko Xaraam ay bilawday dagaalka ay ku doonayso inay dowlad Islaami ah ku dhisto sanadkii 2009-kii.
Kooxda ayaa sare u qaadday weeraradooda kaddib markii laga saaray xarumihii ay ku lahaayeen magaalada Maiduguri, ee caasimadda gobolka Borno, waxa ayna bartilmaameedsanayeen magaalooyinka iyo tuulooyinka ayaga oo dhac iyo dilba ka geysanaya.
Toddobaadyadii u danbeeyey, kooxda waxa ay ka imanayeen xeryaha ay ku leeyihiin baadiyaha iyagoo la wareegayey magaalooyinka muhiimka ah.
Kooxda ayaa gacanta ku haysay magaalada Gwoza, oo ay ku noolyihiin dad gaaraya 50,000 tan iyo bilowgii bishan August.
Sida muuqata waxa ay dib uga baxeen qiyaastii (62 miles) magaalada Gwoza, kaddib markii ay lumiyeen gacan ku haynta magaalada Damboa oo labaduba ay yihiin magaalooyin waaweyn oo ka tirsan Gobalka Borno.
Image caption Dagaalyahanada Boko Xaraam
Hase ahaatee Iskuday xoogagga ammaanka ay ku doonayeen in ay dib ula wareegaan magaalada Gwoza ayaa fashilmay, waxaana hadda diiday in ay dagaalka ka qeyb qaataan 40 askari ayaga oo sheegay in aysan si wanaagsan u qalabeysnayn aysana la dagaallami Karin kooxdan aadka u hubeysan.
Qof deggan Liman Kara, oo u jirta 15km magaalada Gwoza, ayaa u sheegay BBC-da laanteeda Afka Hausa in ay arkeen booliska goobtaasi lagu tababarayey oo ka cararaya xarunta, kaddib markii uu bilowday weerarka subixi Arbacada.
Image caption Iskuul wax barasho ee dalka Nigeria
Waxa uu sheegay in uusan xaqiijin Karin in ay jiraan khasaarooyin. Sarkaal ka tirsan xoogaga ammaanka oo aan dooneynin in uu magaciisa sheego ayaa u sheegay BBC-da in kooxda Boko Xaraam ay "galeen iskuulka" laakiin waxa uu sheegay in uusan xaqiijin Karin in ay la wareegeen gacan ku haynta xaruntaasi sababtuna ay tahay in aysan suura gal aheyn in xiriir lala sameeyo.
Sida laga soo xigtay wargeys ka soo baxa dalka Nigeria oo la yiraahdo Sahara, waxa ay sheegayaan in weerarka xaruntaasi ay ka qayb qaateen boqollaal kooxdaasi ah, halkaas oo lagu tababarayey xilligaasi 290 boolis ah.
Bishii April, kooxda Boko Xaraam waxa ay ka careysiiyeen caalamka oo dhan, kaddib markii ay ka afduubteen 200 oo gabdho iskuuleey ah magaalada Chibok ee Gobalka Borno.
Mareykanka, Britain, Fransiiska, Shiinaha iyo Israa'il ayaa dhammaantood gacan u fidiyay dowladda Nigeria, si loo ogaado halka ay joogaan dadka afduubka geystay, laakiin ilaa iyo hadda lama oga halka jaan iyo cirib dhigeen, waxaana isa soo taraya weerarada ay geysanayaan kooxdaasi.